China A3 T Shirt Printer China Manufacturers & Suppliers & Factory
A3 T Shirt Printer - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-A3 T Shirt Printer)
I-OEM Shoes T Shirt Printer
I-Shoes Sock Printer Machine ishicilela ngokuqondile ekotini, i-hemp, i-silika, uboya, i-nylon kanye nendwangu eyodwa noma ehlanganisiwe, njll. Hlangana nokushesha, okuguquguqukayo, izinga eliphezulu, ukonga amandla, ukufunwa kwemvelo emakethe yokuvikela. I-Shoes A3 T Shirt Printer Phrinta umhlophe no-CMYK ngesikhathi...
Iphrinta ye-T-Shirt e-Flatball esebenzayo
Le phrinta enekhanda lokuphrinta le-DX5, iphaneli yokulawula enobungane, elula ukusebenza. I- head rint ye- Automatic Flatbed T-Shirt Printer yamukela isihloko sokuqala se-dx5. Kukhona amakholomu angu-6 emabhulophu emakhanda okuphrinta kuwo wonke amakholomu aqukethe amabhuzu angu-90, inani lama-nozzles angu-540....
Phrinta ngqo ku-A3 T Shirt Printer
Le Printer ye-T Shirt ye-Cmykw iza nembala engu-6 CMYKWW, enezinkinobho ezinhlanu ze-ink. Umshini wokushicilela we- A3 T Shirt uthola ubuchwepheshe be-MicroPiezo digital, okuyi-printers yokugqoka edayiswa njengephrinta ye-Tshirt eyenziwe yedijithali. Ngempela kuyisinqumo esihle kumakhasimende asezingeni eliphansi noma...
A3 T Shirt Printer I-T Shirt Printer T shirt Printer A3 t shirt printer I-Shoes A3 T Shirt Printer Funny T Shirts Printer I-A4 Size T Shirt Printer T shirt printer